Naadiga Koobka Ciyaaraha - $ 100 Naadi | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Tababarayaasha iyo La-taliyayaasha:
Ma waxaad u raadineysaa lacag dheeri ah waxqabadkaaga ama naadigaaga?
Naadiga Skippers Booster Club wuxuu soo saari doonaa $ 100 jeeg wixii barnaamij ah ee MHS-Waxqabadyada-Xafiisku ansaxiyay ee kaqeyb gala mid kamid ah kulamadayada guud inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Taas bedelkeeda, naadigaaga ama waxqabadkaagu wuxuu heli doonaa jeeg $ 100 ah oo loo isticmaali doono si kasta oo aad uhesho, xarigna kuma xirna! Waa hadiyadeena adiga, maxaa yeelay waxaan ognahay waxoogaa waxtar leh.
Waxa kaliya ee aan ku weydiineyno waa inaad heysataa hal ilaa seddex wakiil oo daqiiqado yar u hadla si aad ugu sheegto kooxdayada waxa aad sameyso, inta arday ee kaqeybqaadata iyo wixii guul ah ee aad kasbatay. Waxaan sidoo kale xiiseyneynaa inaan wax ka ogaanno wixii taageero dhaqaale ah ee aad u baahan tahay si aan ugula socodsiinno rabitaankaaga xubnaheenna. Xor ayaad u tahay inaad dirto tababarayaal / lataliyeyaal, kabtannada ama xubnaha joogtada ah ee daneeya hadalka.
Kooxdaadu waxay soo bandhigi doontaa bilowga kulan kasta ka dibna waxay ku bixi doonaan jeeg ah $ 100. Taasi waa taas! Kulamadayada guud waxaa lagu qabtaa qolka shirarka Barge waxayna bilaabmaan 6:45 pm (fadlan imow shan daqiiqo kahor).
Si aad isuqorto booska, dooro taariikhda kulanka ee hoose oo emayl skippersboosterclub@gmail.com. Fadlan gali $ 100 Naadi khadka maadada ee emaylka. Waxaan u ogolaaneynaa ilaa 8 koox inay soo bandhigaan habeen walba.
Taariikhaha kulanka soo socda ee 2020-2021 waa: Nofeembar 10, Dec 8, Jan 12, Feb 9, Mar 9, Apr 13, May 11.
Saxiix maanta, maadaama dhibcaha si dhakhso leh u buuxsami doonaan. Waxaan rajeyneynaa inaan kula kulanno oo aan taageerno waxqabadkaaga ama naadigaaga!